Wakiilkiisa waxa uu hore u SHIDAY wararka Neymar la xiriirinaya ka tagida Barcelona isaga oo xaqiijiyey in saddex koox ay dalabyo diyaar la yihiin balse hada Aabihiis ayaa isna hadlay…Muxuu yiri? – Gool FM
Wakiilkiisa waxa uu hore u SHIDAY wararka Neymar la xiriirinaya ka tagida Barcelona isaga oo xaqiijiyey in saddex koox ay dalabyo diyaar la yihiin balse hada Aabihiis ayaa isna hadlay…Muxuu yiri?
(Brasilia) 26 Juunyo 2016. Aabaha Neymar ayaa ka hadlay aayaha inankiisa iyo wararka la xiriirinaya Real Madrid.
Waxa uu cadeeyey in aysan jirin fursad uu ugu biirayo kooxda ay Barcelona is xifaaliyaan.
Laacibka u dhashay Brazil waxaa lala xiriirinayey ka tagida Calatans xagaagan, balse majalada Goal waxa ay fahansantahay in Barca ay heshiis cusub u soo bandhigtay weeraryahanka oo uu kula sii joogayo ilaa iyo 2022.
Wakiilka reer Brazil Wagner Ribeiro ayaa sheegay in Neymar uu saddex dalab oo ‘KOOXO WAA WEYN AH” helay laakiin mar la weydiiyey in ay suuragal tahay ku biirida Real Madrid, Aabaha Neymar waxa uu u sheegay Fox Sports Brasil: “Suurtagalnimada uu halkaas ugu dambeenayo waa EBER.
“Neymar waxaa iska leh Barcelona. Dalab walba, weydiin iyo si rasmi ah dalab loo soo gudbiyo oo ka dhana Neymar, su’aal la’aan waa in ay soo maraan Barcelona, kaliya Barcelona.
“Wali waxa uu kooxda kula jiraa qandaraas weyna la socdaan waxa dhacaya.
“Waxaa jira warar badan oo la’isla dhex marayo bartanka ayuuna waxaas oo dhan ka galay. Dada wey la socdaan in kooxo kala duwan ay doonaan kubaddiisa cagta, laakiin ma rabaan in ay sheegaan in uu la hadlayo ama ay jirto wax heshiis ah.
“Dadka kumanaan waxyaabo oo kala gedisan ayey ka sheegeen wiilkeyga. Neymar qandaraas ayuu kula jiraa Barcelona, laba sanaa u dhiman. Taas waa hubaasha kaliya.Waa in uu qadariyaa qandaraaska, wuu ku faraxsan yahay kooxda.
“Wararka la’isla dhex qaadayo wey sii socon doontaa, waqti dheer ayey jirtaa, laakiin qof walba wuu ka qabsaday hada.”
HOR DHAC: Germany Vs. Slovakia
KA BOGO: Rikoodhadii laga diiwaan galiyay kulankii uu xulka Portugal ugu soo gudbay wareega 8-da ee EURO 2016… (Nani oo 100 buuxsaday!)